Home Arimaha Bulshada Squid Game: Netflix oo filimkeedii ugu daawashada badnaa u beddeleysa tartan furan
Shirkadda Netflix ayaa diyaarinaysa dadkii ka qaybgeli lahaa barnaamij telefishin oo lagu samaynayo tartan musalsal ahaan si dhab ah loogu saleynayo nolol-maalmeedka dadka kaasoo laga matalayo filimkeedii ugu daawashada badnaa abid ee Squid Game.
Hase yeeshee, guusha iyo guul-darradu uma dhaxayn doonto nolol iyo geeri sida lagu arkay filimkaas laga daba dhacay ee lagu sameeyay Kuuriyada Koonfureed.
Taas beddelkeeda, tartameyaal ay tiradoodu tahay 456 qof oo ka kala socda guud ahaan caalamka ayaa ciyaari doona noocyo ciyaaro ah oo “qofka guul-darraysta uu waddankiisa ugu laabanayo isagoo faro maran” – sidaasna ku waynaya abaal-marin dhan $4.56m (£3.8m).
Mas’uuliyiinta Netflix ayaa dhowr maalin ka hor xaqiijiyay in la soo saarayo qayb kale oo ka mid ah musalsalkan caanka ah.
Shirkadda ayaa ku dhawaaqday in qaybta cusub ee musalsalka – oo lagu magacaabay Squid Game: The Challenge- kana kooban 10 xalqo ay ka qayb gali doonaan “dadkii ugu badnaa, abaalmarintuna ay noqon doonto lacag caddaan ah oo ah tii ugu badnayd ee taariikhda lagu qaato barnaamij telefishin ka baxa”.
“Ciyaartoyda ayaa ku tartami doona ciyaaro taxane ah oo laga matalay filimkii hore – waxaana intaas sii dheer waxyaabo lama filaan ah oo cusub – dadka fikradahooda, isbahaysigooda iyo dabeecadahooda ayaa loollan la gelin doonaa, halka tartameyaasha qaar laga saari doono ciyaarta,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Netflix.
Dadka ka qaybgalaya ayaa laga rabaa in da’dooda ay ahaato ugu yaraan 21 sano. Waxaa kale oo khasab ah in ay ku hadlaan luuqadda Ingiriiska ayna heli karaan firaaqo afar isbuuc ah oo ku beegan horraanta sanadka 2023-ka, oo ah xilliga barnaamijka la duubayo.
Ka qaybgaleyaasha oo ay tiradooda tahay 456 qof ayaa la waafajinayaa musalsalka oo ciyaartoydiisa ay isla tiradaas ahaayeen. Sidoo kale ciyaartoyga ugu muhiimsan ayaa lagu magacaabi doonaa Seong Gi-hun oo lambartiisu yahay 456.
Filimka xiisaha badan ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ka sheekeynaya qisada dad daymo lagu leeyahay oo u tartamaya lacag aad u badan, iyagoo ka qayb qaadanaya ciyaaro-carruureed aad halis looga dhigay.
Squid Game ayaa noqday filimkii ugu daawashada badnaa ee abid lasoo geliyay Netflix, 28-kii maalin ee ugu horreeyayna waxaa daawaday 111 milyan oo qof.
Soo-saaraha, ahna qoraaga filimka Squid Game, Hwang Dong-hyuk ayaa bayaan uu soo saaray Isniintii ku yiri: “Muddo 12 sano ah ayay qaadatay in la soo bandhigo qaybtii ugu horraysay ee Squid Game oo la daawaday sanadkii lasoo dhaafay. Balse 12 maalin ayay qaadatay in Squid Game uu noqdo filimkii loogu daawashada badnaa ee lasoo geliyay Netflix.”
Shirkadda Netflix ayaa wajahaysa tartan xoog leh oo ay kala kulmayo shirkado kale oo loollan adag kula jira, balse waxaa sidoo kale saamayn ku yeelatay qiimo-kordhin ay samaysay iyo in ay joojisay adeeggeedii ka bixi jiray Ruushka.
Bishii April, waxay mas’uuliyiinta shirkaddan shaaciyeen in uu hoos-u-dhac wayn ku yimid tirada macaamiisheeda, iyadoo ka digtay in ay waayi doonto malaayiin qof oo kale.
Arrintan ayaa qiimaha suuqa ee shirkadda ka jartay in ka badan $50 bilyan, khubarrada ayaana ka digayay in ay adkaan doonto sidii ay Netflix mar kale heerkaas ugu laaban lahayd.
Ish Wararka BBC news
Previous articleAbaarta Soomaaliya: “Wiilkeyga waddada ayaan kusii aasay gabadheydana meeshii aan tagay”
Next articleHaweeney buug ka qortay ‘sida ragga loo dilo’ ninkeedana dishay oo xabsi lagu xukumay
Madaxweynahii Koowaad ee DG Hir-shabeelle Dr.Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri SYL...